SLT SPORTS: Tababaraha Real Madrid Oo Ka Hadlay Arrimo Badan Iyo Qodobo Kale. | Somaliland Today
← Daacish Oo Dil Kuwada Xukuntay Shaqaalaha Twitterka.
Laascaanood: 115 Arday Oo Ka Qalin-Jabiyay Jaamacadda Nugaal →
SLT SPORTS: Tababaraha Real Madrid Oo Ka Hadlay Arrimo Badan Iyo Qodobo Kale.
(SLT-Madrid)-Tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa waraysi dheer siiyay idaacada Radio Cope, waraysigaas oo uu kaga hadlay arimo badan oo la xidhiidha kooxdiisa Real Madrid.
Ugu horayn Ancelotti ayaa hadlay bilawga horyaalka iyo sida ay kooxdiisu ku bilaabatay wuxuuna yidhi: “bilawgii horyaalku wuxuu ahaa mid aad u adag sababtoo ah si fiican maanu u qaadan kulamadii saaxiibtino si aanu diyaar ugu noqono bilawga horyaalka. Ciyaartoydu qaab fiican ayay ku jiraan sababtoo ah waqtigaas waxaanu ku qaadanay tababar”.
Ancelottii ayaa ka hadlay iibka Di Maria isagoo sheegay inuu lacag ugu wareegay Man United wuxuuna sidoo kale ka hadlay iibkii Xavi Alonso wuxuuna yidhi: “Arinta Xavi Alonso way ka duwanayd tan Di maria, sababtoo ah Alonso wuxuu codsaday inuu kooxda ka tago, daal ayuu yara dareemayay marka aad eegto waxa aanu hayno, waanu fasaxnay sababtoo ah waxaanu haysanay doorasho fiican oo ah James iyo Kroos. Alonso naga muu cadhaysiin”.
Waxakale oo Ancelotti wax laga waydiiyay inuu Cristiano Ronaldo yahay ciyaartoygii abid aduunka ugu ficianaa wuxuuna ku jawaabay Ancelotti: “Aad ayay u dagtahay inaad sidaa tidhaahdaa sababtoo ah waqtigu wuu isbadalaaa, xirfadaha ayaa isbadala laakiin hadda waa ciyaartoyga aduunka ugu fiican.Ma barbardhigi karo Ronaldo inuu la mid yahay Pelle ama Maradon”.
Ugu danbayn Ancelotti ayaa la su’aalay inuu isagu doorto ciyaartoyda uu soo iibsanayo iyo inuu Florentino Pérez soo doorto wuxuuna ku jawaabay: “Waxaan leeyahay nasiib fiican, markastana waxaan la shaqeeyaa madax waynayaal aan taageero ciyaareed oo kaliya ahayn balse ah hogaamiyayaal ganacsi kuwaas oo maskax furan, sidoo kalena aan tababaraha u sheegin ciyaartoyda uu la soo wareegayo. Haddii uu madax wayne iwaydiin lahaa inaan ciyaartoy la soo wareego waxaa suurto gal noqon lahayd inaan kooxda iskaga tagi lahaa”.
Luis Suarez Oo Ka Hadlay Kooxdiisii Hore Ee Liverpool Muxuuse Ka Yidhi?
Gool dhaliyihii hore ee kooxda Liverpool ee Luis Suarez ayaa waraysi uu siiyay websiteka rasmiga ah ee kooxdiisa Barcelona kaga hadlay kooxdiisii hore ee Liverpool, wuxuuna sheegay inaysan Liverpool xili ciyaareedkii hore horyaalka sidii ay ugu tartantay aanay ugu tartanteen isaga la’aantii, wuxuuna intaa raaciyay inuu farax kaga tagay Anfield.
Suarez ayaa Liverpool xili ciyaareedkii hore liverpool u dhaliyay 31 gool iyadoo ku sigatay inay ku guulaysto horyaalka ingiriiska balse waxay ugu danbayn ku dhamaysatay kaalinta labaad. Suarez ayaa xagaagii dhawaa 75 milyan oo gini ugu biiray kooxda Barcelona wuxuuna sheegay inuu Anfield ka tagay isagoo faraxsan.
Suarez ayaa todobaadkan la gudoonsiin doonaa abaal marinta kabta dahabka ah oo ay kuwada guulaysteen Ronaldo kadib markii ay wada dhaliyeen min 31 gool, wuxuuna Suarez abaal marintaa ku sharfay inuu u gudoomo tababarihii hore ee Liverpool Kenny Dalglish kaas oo Liverpool ku soo daray.Suarez ayaa sheegay inuu 31 kan gool dhaliyay isagoon hal rekoodhe qaadan isla markaana horyaalka seegay 6 kulan. Inkasta oo uu Suarez 6 kulan ka ganaaxnaa horyaalka ingriiiska ayuu haddana ku guulaysta gool dhalinta Horyaalka ingiriiska iyo waliba tan yurub oo ay Ronaldo ku wada guulaysteen.Suarez ayaa markii uu ka soo laabtay ganaaxii uu ku qaniinay Ivanovic kooxdiisa u dhaliyay 19 gool, 12 kii kulan ee ugu horeeyay.
Suarez oo arimahaa ka hadlaya ayaa yidhi: “Aad ayaan ula dhacsanaa shaqada ay kooxdu qabatay, laakiin waxaan seegay lix kulan, waxaanan 31 ka gool ee horyaalka dhaliyay anigoon wax rekoodhe ah qaadan”.
“Runtu waxay tahay inaan kooxda ka tagay anigoo faraxsan, haddii aanan lahayn maskaxdii iyo waliba aragtidii aan kooxda hore ugu wadi lahaa, liverpool maysamayseen wixii ay samaysay. Inaan dib ugu soo laabano Champions Leaquegu waxay ahayd bartilmaameed aan maskaxda ku hayay”.
“Guulaha shaqsiga ah markasta waan soo dhaweeyaa, farxad ayaanad ku dareemaysaa, waana aqoonsiga shaqada adag ee aad qabatay, laakiin xili ciyaareedkii hore waxaan arintan ka hormariyay inay Liverpool guulaysato, waxayna ku sigatay inay qaato horyaalka taas oo wax khaas ah noqon lahayd”. Suarez ayaa sidan u sheegay Websiteka Barcelona wuxuuna todobaadkan la gudoonsiin doonaa kabta dahabka ah ee Yurub.
Luis Suarez ayaa liverpool ugu soo biiray lacag dhan £22.8m oo gini,isagoo ku soo biiray sanadkii 2010 wuxuuna u dhaliya 82 gool intii aanu ku biirin Barcelona.Halkan hoose ka akhri sida uu u kala dhaliyay goolashaas.
2010-2011: 13 kulan, 4 gool
2011-2012: 39 kulan, 17 gool
2012-2013: 44 kulan, 30 gool
2013-2014: 37 kulan, 31 gool
Total: 133 kulan, 82 gool
Muxuu Radamel Falcao Ka Yidhi Jamaahiirta Man United Ee Ku Heesa Magaciisa?
Xiddiga cusub ee Manchester United Radamel Falcao ayaa ka hadlay sida dareenkiisa yahay marka uu maqlo taageerayaasha Manchester United oo ku heesaya magaciisa.
Xiddiga reer Colombia ayaa durbaba ka noqday ciyaaryahan laga jecel yahay Old Trafford ka dib markii uu amaah kaga soo biiray kooxda Monaco iyadoo Man United ay doorasho u leedahay inay qandaraaskiisa joogto ka dhigto.
Isagoo u hadlayay MUTV, Falcao ayaa yidhi: “Waa mucjiso. Waxa ay u dhawaq egtahay sida gugac ama onkod garoonka ka dhex yeedhaya.”
Falcao ayaa afar kulan uu u saftay Red Devils waxa uu u dhaliyay hal gool, isagoo kulankiisii ugu horeysay ee maaliyada Red Devils ku ciyaaray 14kii September kulan ay martigeliyeen QPR.
Lionel Messi Jamaahiirta Real Madrid Ma Ku Qasbi Doonaa Inay Bernabeu U Sacabiyaan Sidii Ronaldinho?
17 kii bishii November ee sanadkii 2005 ayuu xidigii hore ee xulka qaranka Brazil iyo koox Barcelona ee Ronaldinho qasab kaga dhigay inay jamaahiirta Real Madrid ugu sacabiyaan Santiano Benabue isla markaana u guuxaan bandhiga laacibkan, markaas oo uu laba gool ka dhaliyay kooxdooda Real Madrid.
Arintan ayaa ah waxyaabo uu Messi u baahan yahay inuu gaadho, Messi ayaana kulankaa gool ka caawiyay inuu Eto’o kooxdiisa Barcelona u dhaliyo.Messi ayaa saddex sano kadib ka fikiraaya inuu abaal marin ku dhex gudoomo Santiago Bernabue taas oo ah inuu noqon karo laacibka ugu goolasha badan horyaalka Spain taariikhda uu soo jiray oo dhan.
Deco iyo Motta ayaa Messi ku qaadi jiray baabuurtooda markaas oo aanu Messi haysan sharciga wadista baabuurta da’diisa oo yarayd awgeed. Messi ayaa ahaa ciyaartoyga kaliya ee loo ogolaa inuu miiska Ronaldinho soo fadhiisto, wuxuuna ku qaadan jiray saacado badan isagoo sheekooyin badan la wadaagi jiray. Waxakale oo uu Messi waqti la qaadan jiray Sylvinho kaas oo caawiyay markii uu Messi ka tirsanaa Barca B.
Ronaldinho ayaa Messi ugu jiray halka uu qof ugu jiro walaalkiisa wayni, laakiin markii uu Guardiola la wareegay shaqada tababaranimo ee Barcelona ayuu bilaabay inuu kooxda ku duldhiso Lionel Messi.Messi ayaa intii hore oo dhan ku hoos jiray hadhka Ronaldinho laakiin Messi ayaa marba marka ka danbaysa horumar wayn samaynayay.
Hadda waxaa lays waydiinayaa inuu Lionel Messi samayn karo arintii uu saaxiibkii Ronaldinho ka sameeyay Bernabeu, wuxuuna Messi ku jiraa todobaad ay indha caalamuku eegayaan. Gudoomiyaha FA ga Spain Tebas ayaa cadeeyay in hadii uu Messi jabiyo rekoodha gool dhalinta ee horyaalka Spain in Santiago Bernabue loogu xafladayn doono.
Real Madrid iyo Barcelona ayaa 26 bishan ciyaari doona kulankii ugu horeeyay ee xili ciyaareedkan. kulankan ayaa ka dhici doona garoonka Real Madrid ee Santiago Bernabeu. waxaana markii ugu horaysay iska hor iman doona BBC iyo MSN. Bale, Benzema iyo Cristiano ayaa ku jira qaab wanaagsan iyadoo Ronaldo oo kaliyi uu dhaliyay 13 gool.
Dhinaca kale Messi, Suarez iyo Neymar ayaa la filayaa inay kulankan garoonka cagta wada saari karaan inkasta oo Suarez uu waqti u baahan doono. Messi, Suarez iyo Neymar ayaa xulalka qaramadooda u dhaliyay 8 gool, kulamadii ugu danbeeyay ee shalay iyo maanta.